Home News Sharif Xassan iyo Xassan Kheyre oo heshiis ka dhan ah MW Farmaajo...
Sharif Xassan iyo Xassan Kheyre oo heshiis ka dhan ah MW Farmaajo wada galay. Waa maxay Heshiiskaas?
Dhowrkii bilood ee ugu danbeeysay waxa socday wadahadal u dhaxeeyay MW Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Sharif Xassan iyo RW Xassan Cali Kheyre. Wadahadlkaan oo soo bilaawday sadax bilood ka hor ayaa waxa uu hada soo gaaray marxalad ay labada dhinac kala saxiixdaan heshiis isbahaysi. Heshiiskaan ayaa salka ku haya sadax qodod;
In Sharif Xassan oo kaalmaysanayo gudoomiyaha Baarlamaanka, Maxamed Mursal iyo ku xigeenkiisa Cabdiwali Muudey uu taageeo buuxdo siiyo RW Xassan Cali Kheyre, taargeeradaas oo lahaan doonto labo waji, a) in dagaalka ka dhaxeeya MW Farmaajo iyo RW Kheyre oo la filaayo in uu si toos ah u soo shaacbaxo dhawan uu Sharif Xassan kala shaqeeyo in RW Kheyre olalalaha lagu ridaayo ama lagula dagaalaayo MW Farmaaho. b) in uu ka difaaco cualyskastaa ee siyaasadeed ee kaga imaanayo beelaha Digil iyo Mirrifle iyo dowlad goboleedyadda.
RW Kheyre ayaa taageero lacageed oo buuxda siin doono Musharax Sharif Xassan marka doorashada soo dhawaato, waxa uuna qayb ka noqon doonaa olalaha dib loogu dooranayo MW Sharif Xassan.
RW Kheyre ayaa isaga oo istcimaalayo awooda dowladda dhexe waxa uu balan qaaday in uu meelayn doono qaar ka mida mucaaradka ka soo horejeedo Sharif Xassan, taas oo macnaheedu tahay in qaarkood uu lacag siin doono halka qaar kalana uu jagoon dowladeed u magacaabi doono.
Xaaska Sharif Xassan ayaa qaraabo ama ehel hoose waxa ay wada yihiin RW Xassan Cali Kheyre taas oo keenaysa in Sharif Xassan uu la safto Kheyre. Dhanka kale Sharif Xasssan ayaa abaal weyne u hayo RW Xassan Cali Kheyre kaas oo salka ku haya kaalintii RW Kheyre ka qaatay in hogaanka laga wareejiyo Gudoomiye Maxamed Cusmaan Jawaari oo ahaa shaqsi sharif Xassan u arkaayay in uu qatar ku yahay rabitaankiisa siyaasadeed.
Waxaa dad badan dareemayaan in Sharif Xassan ujeedadiisu ugu wayn tahay in uu lacag ka dhaco Xassan Cali Kheyre laakiin uusan waxba u qaban doonin. Sharif Xassan ayaa lagu yaqaanaa qiyaano iyo in uu dadka saaxibadiisa ah dhabarka ka toogto. Sharif Xassan waligiis kuma guulaysan in uu qof saaxibkii ah ama uu isaga uu taageeray uu ku guulaysto hogaan siyaasadeed oo nagaada sababta oo ah naceeybka isaga loo qabo ayaa keenaya in qofka uu taageero uu lumiyo kalsoonida shacabka. Xassan Cali Kheyre waxaan shaki ku jirin uu ku biiri doono liiska dadkii uu horay ulumiyay sharif xsaan isaga oo lacagt ka dhacay sida; Cabdirashid Xidig, Ibrahim Yarow, Cabdi Haashi, Xassan Shiikh, Cali Khalid Galyd, Shiikh Sharif Cabdullahi Yusuf, Shiikh Adan Madoobe iyo qaar kale oo badan.
Previous articleSaraakiil iyo askar ka tirsan Ciidamada Booliska Somaliyed ayaa loo xiray eedeymo la xiriira dhanka musuq maasuqa iyo amar diido
Next articleXog: Qatar oo qorsho halis ah la damacsan sidii shacabka Soomaaliyeed loo caburin lahaa
Gawaarida Wasiirada Cabdi Wali Gaas oo Laga Fiiqayo Muraayadaha Madoow
Goorma Ayeey Cadaaladda Helayaan Qooyska Ex-Wasiir Cabaas Siraaji,Maxeeysa Tahay Sababta Madaxweyne...